श्रमजिवि पत्रकारको हक, हित र अधिकारको लागि महासंघको अध्यक्षमा मेरो उम्मेदवारीः तीर्थ कोइराला (भिडियोसहित)
‘महासंघलाई राजनीतिक प्रभाव मुक्त बनाउने प्रतिबद्धता’
प्रकासित मिति : २०७४ भाद्र २, शुक्रबार प्रकासित समय : १०:३३
(छापा सञ्चारमाध्यमदेखि टेलिभिजन र अहिले अनलाईनमा काम गरिसकेका योग्य, सफल र कुशल पत्रकार हुन्, तीर्थ कोइराला । उनी अहिले पत्रकार महासंघको २५ औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदको उम्मेदवार बन्ने चर्चा ब्यापक छ । जीवनको ३४ बर्ष पत्रकारीता पेशामा बिताएका कोइराला अहिले काठमाडौंबाट सञ्चालनमा रहेको थाहा खबर डटकमका प्रधानसम्पादक समेत हुन । उनी नेकपा एमाले निकटको पत्रकारहरुको संगठन प्रेस चौतारीको तर्फबाट महासंघको अध्यक्षका लागि निर्वाचनमा होमिएका छन । विभिन्न साना संगठनहरुसँग गठबन्धन बनाएर निर्वाचनको प्रचारमा होमिएका कोइरालालाई हरपल नेपाल डटकमले एजेन्डा र तयारीका विषयमा कुराकानी गरेको छ । कोइरालाले महासंघलाई राजनीतिक प्रभावमुक्त बनाउने आफ्नो प्रयास हुने बताएका छन । त्यस्तै उनले श्रमजिवि पत्रकारहरुको हक, हित र अधिकारको पक्षमा, साना लगानीका मिडिया र समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीको पक्षमा आफुले काम गर्ने बताएका छन । प्रस्तुत छ कोइरालासँग गरिएको कुराकानी– )
अहिले तपाई पत्रकार महासंघको अध्यक्ष पदको उम्मेदवारको लागि चर्चामा हुनुहुन्छ, अध्यक्षमा उम्मेदवारीमा किन दिने तपाई ?
-अहिले नेपालको सञ्चार क्षेत्र समस्यामा देखिन्छन, किनभने अहिलेसम्म हामी नेपालका पत्रकारहरुले राजनीतिक लडाई लडेर सधै अभावको कुरा गर्यौ, सधै दुःखको करा गर्यौ र सधै अप्ठ्यारोको कुरा मात्र गर्यौ । हामी अहिले अर्कै फेजको लडाई र दुःखमा छौँ, एउटा लडाई सिध्यायौँ, भन्नाले प्रेस फ्रिडमको लडाई सिध्यायौँ, प्रजातन्त्रको लागि लडिने लडाई हामीले सिध्यायौँ, अब अहिले आएर यो मिडियामा अथाह सम्भावनाको लहर देखिराखेको छ । पत्रकारीता क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोगले यति विकसित भएर आएको छ कि त्यो टेक्नोलाजि हिजो थिएन । अहिलेको पत्रकारीतामा टेक्नोलाजि पनि नयाँ छ, सबै एजुकेटेड मेन पावर आएका छन, अहिले हरेक मिडिया हाउसमा तपाईले विज्ञापन खोल्नु भयो भने आम पत्रकारीतामा एम.ए नगरेको, बिए नगरेको आउदैनन् । तर अहिले पनि फेरी के छ भने, यो पुस्ताले पनि तलब नपाएको कुरा गरिरहेको छ । अहिले समस्याहरु पनि छन, जस्ले लगानी गर्यो त्यो मुनाफा भएन भनिराखेका छन, त्यो पनि समस्या छ । टेक्नोलोजि त आएको छ, तर त्यो पनि हामी परफेक्ट रुपमा युज गर्न सकेका छैनौं अथवा मिस युज भयो भने त्यसको अझै सहि ढंगले सदुपयोग भएन तसर्थ आज मेनपावर एजुकेसन लिएर आएको पुस्ता भएपनि स्किल लिएर आएनको छैन, त्यो स्किलको विकास गर्नुछ हामीले । त्यो सँगसँगै प्रजातन्त्रको एउटा लडाई, एउटा फेज पार गरेपनि संविधानले दिएका अधिकारहरु प्रतिबद्धता, वाक्यंसहरु छन, त्यसलाई फेरी कतै उचालेर सत्ता शक्तिमा बस्नेले फेरी केहि गर्ने हुन कि भनेर आशंका पनि छ । त्यो आशंकाहरुको बीचमा अहिले पत्रकारीताले विश्वसनियता जति हासिल गर्नुपर्ने हो त्यो हासिल गर्न सकेको छैन । पत्रकारहरु अहिले पनि विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ता हुन कि भन्ने जस्तो पनि देखिदैँछ, एउटा पत्रकारको अर्को पेशा छ कि भनेर प्रश्न पनि गरिदैँछ । यि सबै एजेण्डाहरुको विषयमा निकाय दिनुपर्ने बेला भएको छ । पत्रकार महासंघले त्यसमा फेसिलेटेट गर्न सक्छ । त्यसका सम्बद्ध स्टेक होल्डरहरुलाई एटेज गर्न सक्छ भन्ने आशयले मैले अध्यक्ष पदमा आफ्नो उम्मेदवारी अगाडि सारेको हुँ ।
महासंघको महाधिवेशन पनि नजिकिदैछ, तपाईहरु अहिले सबै चर्चामा हुनुहुन्छ, तपाईलाई नै पत्रकार साथिहरुले भोट दिनुपर्ने कारण के छ त्यस्तो ?
‍-पहिलो त मेरो एजेण्डा नै हो, ति एजेण्डामा तपाई सहमत हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ? र यि मेरा बुँदाहरुलाई लिएर मैले विभिन्न दलका नेताहरु, विभिन्न पत्रकार संगठनका नेतृत्वहरुसँग पनि कुरा गरेको छु, उहाँहरु सहमत हुनुहुन्छ । अब हामी पत्रकारको लगानीको विषय, पारिश्रमिकको विषय, बजार विस्तारको विषय र स्किल बढाउने कुरामा सहमत हुन्छौ कि हुदैँनौ र त्यसमा सहमत हुने सबै साथीहरुले मलाई भोट दिनुपर्छ, दिन्छन भन्ने हो । मैले अहिलेसम्म जति साथिहरुसँग कुरा गरेको छु, भेटघाट गरेको छु, उहाँहरु सहमत हुनु भएको छ र म उहाँहरुको साथ सहयोग प्रति विश्वस्त भएको छु ।
तपाईहरुको चुनावी प्यानलको विषयमा कुरा गरौँ, कस्तो छ तपाईहरुको गठबन्धन, प्यानलको संरचना कस्तो बन्यो ? चुनाव जित्ने आधारहरु के छन ? अंकगणित सहितको जानकारी दिनुस न ?
-निर्वाचनको विषयमा म धेरै अंक गणितमा जान चाहन्नँ, म यि एजेण्डाहरु लिएर विभिन्न पत्रकार संगठनहरुसँग गए टेक्निकल्लि उहाँहरु मसँग आउन सक्नु भएन । तर अहिले चाहि मलाई प्रेस चौतारी मैले उठाएका एजेण्डामा सहमत भयो र म उहाँहरुको समर्थनमा चुनाव लड्ने वातावरण बन्यो । हाम्रो गठबन्धनमा प्रेस चौतारी लगाएत अरु संगठनहरु पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरु सबै मेरा एजेन्डाहरुमा सहमत हुनुहुन्छ । अहिले पनि मसँग काम गरेको साथिहरु हुनुहुन्छ, उहाँ विभिन्न संगठनहरुमा आवद्ध हुनुहुन्छ । म विगत लामो समयदेखि पत्रकारीता पेशामा आवद्ध छु, साप्ताहिक काम गरे, दैनिकमा गरे, पाक्षिकमा गरे, टिभिमा गरे, रेडियोमा गरे र अहिले अनलाइनमा गर्दैछु । तसर्थ साथीहरुको साथ सहयोग मिल्न भन्नेमा छु ।
कति वर्ष भयो तपाईले पत्रकारिता गर्न लागेको ?
-म अहिले पत्रकारीता पेशामा काम गर्न लागेको ३४ औँ वर्ष भयो । म पत्रकारीतासँग सम्बन्धीका विभिन्न संस्थाहरुसँग पनि संलग्न छु । म नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटसँग सम्बद्ध छु, नेपाल वातावरण पत्रकारहरुसँग सम्बद्ध छु । ति संस्थाहरुसँग सम्बन्धी त साथिहरु मैले विभिन्न अवस्थाहरुमा चाहिने जति साथिहरुलाई भेटेको छु उहाहरुसँग परिचित छु , उहाँहरु यो एजेण्डाहरुमा कन्मिन्स हुनुहुन्छ त्यसैले म गणितिय खेल भन्दा पनि उहाँहरुको मन म मा आउछ भने मैले विश्वास दिएको छु ।
पत्रकार साथीहरुलाई एउटा जिज्ञासा पक्कै पनि होला, तपाईको नेतृत्वमा जाने पुरै टिम विजयी हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ? अनि कुनै एउटा पात्र मात्र विजयी हुने कति ?
-मैले सबै ंगठनहरु र पत्रकार साथीहरुलाई के भनेको छु भने, तपाईहरुले छान्ने उम्मेदवार प्रोफेस्नल पत्रकार हुनुपर्छ । प्रत्यक्ष राजनीतिबाट टाढा भएकोलाई रोज्नुस् । त्यो भनेको पोलिटिक्स बुझ्दै नबुझेको, नन् पोलिटिक्स मान्छे भनेको होइन । पत्रकार भनेको पोलिटिकल्लि लेटेस्ट मान्छे हो । त्यस्तो मान्छे छान्नुस भनेको छु । अब त्यस्तो टिम विजयी हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
त्यसको मतलब तपाईको प्यानल नै विजयी हुन्छ भन्ने हो ?
-प्यानलमा भएका सबै विजयी हुन्छन भनेर मैले कसरी भन्ने, सबै ढिक्का नै आउछ त्यो हुन पनि सक्छ, त्यो हुँदै हुँदैन भन्ने पनि होईन तर प्यानल भन्दा पनि प्रोफेस्नल जर्नालिस्टहरुले जित्नुपर्छ चुनाव भन्नेमा म छु । त्यसले हाम्रो नेपालको पत्रकारीतालाई एउटा प्रोफेस्नल हाई बनाउनेमा मेरो प्रयास रहन्छ र पत्रकारले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, पत्रकार महासंघले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम नेतृत्व आउनेछ भन्नेमा पूर्ण रुपमा विश्वस्त छु ।
तपाईले ३४ वर्षको समय सञ्चार क्षेत्रमा बिताउनु भयो, तपाईको नजरमा मिडिया क्षेत्रका मुख्य समस्याहरु के, के छन र त्यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ?
-सबैभन्दा ठूलो समस्या त श्रमजिवि पत्रकारहरुमा देखिदै आएको छ । दाश्रो कुरा सानो लगानीका पत्रिकाहरु, मिडियाहरु समस्यामा छन । अब अहिले हामी प्रादेसिक विभाजनमा नै गैरहेका छौँ, त्यहाँ गैसकेपछि के गर्ने अब दोधारमा पनि छ एक खालको, त्यसपछि गएर यसमा एक खालको स्किलको ठूलो समस्या छ, प्रश्न उठिरहेको छ, पत्रकारमा भाषा शुद्ध छैन । सूचना सहि छैन, किन भन्दाखेरी स्किलको कुरा छ । त्यसमा योजनाबद्धरुपमा काम गर्ने कुशल नेतृत्व चाहिन्छ । पत्रकारले नेपालमा अझै नबुझेको कुरा, हामी मेनपावर थपिदा समग्र हाम्रो पृष्ठभूमि, हाम्रो आर्थिक पेष्ठभूमि, साँस्कृतिक पृष्ठभूमि र समावेशि कारणको समस्या छ, अहिले पनि समावेशि उस्तै छ, कानूनले अथवा संगठनले समावेशि भनेको छ तर साँचो अर्थमा ति आवाजहरुलाई अझै समेट्न सकेको छैन पत्रकारिताले । त्यो समेट्नको लागि उपायहरु खोज्नुपर्छ ।
यदि तपाईको नेतृत्वको टिम महासंघभित्र प्रवेश गरेछ भने यि सबै समस्याको हल देख्नुहुन्छ तपाई ? सम्भव छ ?
-यो कुरा पत्रकार महासंघ एक्लैले गर्ने होइन, त्यसका लागि हामी स्वंयम् पत्रकारहरु पनि लाग्नुपर्ने हुन्छ । दोश्रो नम्बरमा पत्रकारीतासँग सम्बन्धीत इनस्टिच्युटहरु छन र ति इस्टिच्युसनहरुको अप्रेसन चाहिन्छ, तेश्रोमा नेपालको पालिटिकल पार्टीहरुले पनि पत्रकारहरुलाई, पत्रकार महासंघलाई त्यसरी चल्न दिनुपर्छ, त्यसपछि सरकारले पनि एउटा वातवरण बनाईदिनुपर्छ । त्यसपछि हामीले काम गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ ।
महासंघको नेतृत्वबारे साझाँ आरो छ, पत्रकार महासंघलाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्न सकिएन भन्ने । तपाईमा महासंघ चल्ने अवस्था आएमा त्यो समस्या झेल्न पर्छ कि पर्दैन ?
-मलाई लाग्छ केही काम भने पक्कै हुन्छ तर पुरै क्लिन हुन्छ, बहुत हुन्छ भन्ने म आफैँलाई पनि लाग्दैन, फेरी पत्रकार आफैँ पनि पालिटिकल सम्बन्धबाटै आएका हुन्छन, राजनीति नबुझेको पत्रकार हुदैन । तर कुनै पार्टीगत राजनीति चाहि नगरोस, सिद्धान्त त हुन्छ पत्रकारको, भोट पनि हाल्छ पत्रकारले तर महासंघलाई कुनै पार्टी जस्तो बनाएर नचलाईयोस भन्ने कुरामा चाहि हामी सचेत रहने छौँ । यसले महासंघलाई एउटा पत्रकारले राजनीति भन्दा पनि पेशामा ध्यान दिनुपर्नेमा केन्द्रीत गराउने छ ।
अब तपाईलाई भोट हालने पत्रकार साथीहरुले कसरी बुझ्ने, तपाई प्रेस चौतारीको नेता पनि हो भनेर वा स्वतन्त्र, सक्षम, सवल र लामो समयदेखि पत्रकारिता गरेको एउटा योग्य पत्रकार भनेर ?
चौतरी समथिर्त, व्यवसायिक, योग्य र आफ्नो पत्रकारिताको इथिक्समा बस्ने र बस्न मद्दत गर्ने पत्रकार हो म । साथीहरुले त्यही ढंगले मलाई बुझ्नभयो भने न्यायसंगत हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
र अन्तिममा पत्रकार साथिहरुलाई तपाइले आफ्नो पक्षमा मत माग्न सक्नु हुनेछ, कसरी माग्नु हुन्छ ?
-मैले मेरा एजेण्डाहरु भनिसके, मेरो एजेण्डामा तपाई पक्कै सहमत हुनुहुन्छ र त्यो सहमत भएको प्रमाण नै मलाई दिने मत हो । त्यसैले मलाई मत दिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
– (राज्य व्यवस्थालाई भत्काउन, ध्वंशात्मक युद्ध गर्दै बन्दुक उठाउने विद्रोही नेता र राज्य व्यवस्थालाई
‘संसदीय सुधारवादी दलहरुका विरुद्ध मुठ्ठी चिन्हमा मतदान गरौंः जनवादी व्यवस्था रोजौं’
(स्थानीय निकायको निर्वाचन सकिएपछिको अवस्थामा अहिले मुलुकमा पुर्न चुनावी माहोल बढेको छ । पूर्व